we also – Zulu Translation – Keybot Dictionary
Sijwayele ukuhlola ukulandelwa Komgomo wethu Wobumfihlo. Siphinde sihambisane nemihlahlandlela yokuzilawula embalwa Uma sithola izikhalazo ezibhalwe phansi, siyoxhumana nomuntu owenze isikhalazo ukuze silandele udaba lwakhe. Sisebenzisana neziphathimandla zokulawula ezifanele, okubandakanya iziphathimandla zendawo ezivikela imininingwane, ukuxazulula izikhalazo ezimayelana nokudluliswa kwemininingwane esingakwazi ukuthi sizixazulule ngqo nabasebenzisi bethu.
Sihlale sibuyekeza ukuthobela kwethu Inqubomgomo Yobumfihlo. Siphinde futhi sithobele izinhlaka zokuzibusa ezimbalwa, kufaka phakathi i-EU-US Privacy Shield Framework. Uma sithola izikhalazo ezibhalwe phansi, siyoxhumana nomuntu owenze isikhalazo ukuze silandele udaba lwakhe. Sisebenzisana neziphathimandla zokulawula ezifanele, okubandakanya iziphathimandla zendawo ezivikela imininingwane, ukuxazulula izikhalazo ezimayelana nokudluliswa kwemininingwane esingakwazi ukuthi sizixazulule ngqo nabasebenzisi bethu.